Nzira Yechokwadi! Umambo hwaMwari Huri Kuuya Nokukurumidza! TheTrueWay.xyz | Chokwadi cheBhaibheri chinotsanangurwa - Nzira Yechokwadi - TheTrueWay.xyz & jw.org
Nzira Yechokwadi! Umambo hwaMwari Huri Kuuya Nokukurumidza! TheTrueWay.xyz
Dhinda 🖨 PDF 📄 eBook 📱
Nzira Yechokwadi! Umambo hwaMwari huri kuuya nokukurumidza!
Shoko raMwari ndi what vanhu vanofanira kutarisa. Ndiro chiedza chinopenya chechokwadi chinogona kubatsira vanhu kururamisa kunamata kwavo kune Wemasimbaose.
Basa resangano iri nderekudzokera kumashure sezvinobvira kuzvitendero zvepakutanga zvevadzidzi vaKristu vepakutanga, vachibvisa dzidziso dzenhema dzakanga dzapinda. Kunamata kwakachena kwevadzidzi vokutanga kwakasvika pakuzivikanwa se“Nzira” (Nzira Iyo)Mabasa 9: 1-2) Naizvozvo, mishoni iyi inonzi Iyo Yechokwadi Nzira.
Nzvimbo iyi yakagadzirirwa vanhu kuti vadhinde nyaya nezvidzidzo zvavo kana kuti zveushumiri!
Chokwadi hachina basa nekubvunzwa asi nhema dzinoita.
Kune varume nemasangano akawanda anoda kuti vanhu vatarisire kwavari, vachiti vanotsigirwa naMwari uye vanoita zviratidzo zvine simba. Asi vanhu vaMwari havazonyengedzwi. Shoko remunhu rinongokonzera kupererwa. Jeremiah 10: 23
Vadi vaMwari vachagara vachitarira kumashoko aMwari nokuda kwevimbiso nenhungamiro. Nzvimbo iyi inobatsira vanhu kuongorora zvavanotenda uye kugadzirisa kunamata kwavo, kana zvichidiwa, uye kuti vave noukama huri nani neWemasimbaose. Mabasa 17: 11-12
Ungafunga kuti haufaniri kuongorora zvaunotenda. Ndizvo chaizvo mushori mukuru Wemasimbaose anoda kuti iwe ufunge. Anoda kuti vanhu vatevere shoko revanhu kwete raMwari. Kusava nehanya kunogona kuva nenjodzi.
Dai isu tingawanikwa takagadzirisa kunamata kwedu, pazuva rekuongorora!
Shanyira Facebook boka
© 2022 Nzira Yechokwadi! Umambo hwaMwari Huri Kuuya Nokukurumidza! TheTrueWay.xyz